Ivided साथ ईमेल अधिग्रहण विनिमय Martech Zone
Ivided साथ ईमेल अधिग्रहण विनिमय
शुक्रबार, जनवरी 20, 2012 शुक्रबार, जनवरी 20, 2012 Douglas Karr
अनलाइन मार्केटिंग ईन्डस्ट्रीमा ईमेल हावी रहेको छ। जबकि टेक्नोलोजीले आफैंलाई अनलाइन मार्केटिंगको लगभग सबै पक्षहरूमा समाहित गर्‍यो, ईमेल त्यस्तो देखिन्छ जुन दुई दशकमा बितेको मात्र हो। सस्तोमा हालसालैको प्रगतिहरू मार्केटिंग स्वचालन उत्साहजनक हो, तर अधिग्रहण, अनुमति र स्पाम अझै पनि उद्योग को चुनौतिहरु का नेतृत्व।
उत्कृष्ट सामग्री र सान्दर्भिक ईमेल निर्माण गर्नु सजिलो अंश हो ... सबैभन्दा गाह्रो अंश अझै अधिग्रहण हो। एक महान मार्केटिंग सूची निर्माण अविश्वसनीय गाह्रो हुन सक्छ। स्प्यामको उच्च मात्राको साथ, उपभोक्ताहरू आफ्ना ईमेल ठेगानाहरू ठीकसँग सुरक्षित गर्दछन् र यसलाई साझेदारी गर्न हिचकिचाउँछन्। कसैलाई ईन्टेन्सी गर्नको लागि यो निकै चुनौती हुन सक्छ, त्यसोभए मार्केटरले के गर्ने?
डिसेम्बरमा, रातो हेरेर उनीहरूको ग्लोबल १०० इनोभेसन अवार्ड विजेताहरू बीच आइभिडेंस घोषणा गरियो। आइभिडन्स पहिलो स्ट्यान्डअलोन अधिग्रहण ईमेल विज्ञापन एक्सचेन्ज हो, उत्तम रेकर्डमा ईमेल प्रस्तावहरू मिलाउन व्यवहार लक्ष्यीकरण टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ, ताकि सूची मालिकहरू 'कम पठाउन र अधिक कमाउन' सक्दछन्, उनीहरूको सूचीलाई ईमानदारीका साथ मुद्रीकरण गर्दै विज्ञापनदाताहरूले सकारात्मक आरओआई देख्दछन्।
यहाँ एक उदाहरण ईमेल छ ... विज्ञापनदाता छ फोर्ड र सूची प्रबन्धक हो जीवन संग कनेक्ट गर्नुहोस्, एक साइट जसले उपभोक्ताहरूलाई घर जग्गा सम्पत्ति, गृह मर्मत-सम्भार र अटो डीलरसँग जोड्दछ।
यो केवल एक होईन तेस्रो-पार्टी विज्ञापन। सामग्री ध्यानपूर्वक डिजाईन गरीएको छ र श्रोतालाई ध्यानपूर्वक मेल खाएको छ सुनिश्चित गर्न सूची प्रबन्धकलाई ग्राहक हराउने जोखिममा छैन। किनकि सामग्री श्रोतासँग निकट मेल खाएको छ र यसको विपरित हो, आइभिडेन्स धेरै उच्च क्लिक-थोरै दरहरू प्राप्त गर्दैछ प्याटेन्ट-पेन्डि pending स्कोरिंग पद्धति मार्फत, जसलाई @ रंक भनिन्छ। @ रान्क उच्चतम गुणस्तरको रेकर्ड प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन बजारले तिर्न तयार छ।
मल्टिभेरिएट स्कोरिंग समावेश:
@brand affinity - यो स्कोर मापन एक उद्योग वा एक ब्रान्ड को कती नजिक छ मापन। यो अनुक्रमणिका लक्ष्यों र मूल्य निर्धारण सूची क्षेत्रहरू र प्रोफाइलहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
@ अभियान गुणवत्ता - यो स्कोर आइभिडिस नेटवर्कमा सञ्चालित अधिग्रहण अभियानको प्रदर्शनमा आधारित छ। तपाईं आफ्नो ईतिहास र औसत बजार प्रदर्शनको बिरूद्ध तपाईंको अभियान बेन्चमार्क गर्न सक्नुहुन्छ।
@ सम्भावित - यो अनुपातले ईमेलहरूको संख्या प्रतिबिम्बित गर्दछ जुन समय अवधिमा सही लक्ष्यमा डेलिभर गर्न सकिन्छ। यो अनुमति मार्केटि and र मार्केटि pressure दबावको संयन्त्रसँग सम्बन्धित छ।
विज्ञापनदाता र सूची प्रबन्धक दुबै तथ्या into्कमा अन्तरदृष्टि दिइन्छ - एक फनेल डायग्राम (माथिको उदाहरणले वैकल्पिक रूपान्तरण ट्र्याकिंग देखाउँदैन) र सबै कुञ्जी प्रदर्शन संकेतकहरूको साथ ड्यासबोर्ड।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, ग्राहक डाटा निजी राखिएको छ र प्रकाशकबाट प्राप्य छैन। आइभीन्डनले कडा मेहनत गर्छ कि प्रकाशकहरूले ठूलो सामग्री प्रदान गरीरहेका छन् जुन उनीहरूका दर्शकहरूले सराहना गर्छन् ... र विज्ञापनदाताहरू प्रासंगिक ग्राहकहरूको अगाडि पर्दछन् जसले प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिन चाहन्छन। इभिडिसनले पनि उत्कृष्ट प्राप्त गर्न काम गर्दछ ईमेल वितरणयोग्यता.
टैग: ईमेल अधिग्रहणईमेल विज्ञापनइमेल मार्केटिङआइभिडन्सग्राहक अधिग्रहणतेस्रो-पार्टी ईमेल विज्ञापन
डिलिभ्राले नयाँ वेबसाइट सुरू गर्‍यो
एक SEO धोका कसरी पत्ता लगाउने